ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ လုပ်ငန်းသုံး Laptop တစ်လုံး၀ယ်ဖို့အတွက် ရွေးရခက်နေပြီလား? – SUNNY Tech News
Posted byDaxDo 6th Nov 2020 22nd Nov 2020 Posted inUncategorized
အခုနောက်ပိုင်းအလုပ်တွေမှာ ဘယ်အလုပ်မဆို Laptop တစ်လုံးတော့မရှိမဖြစ်လိုအပ်လာကြပါတယ်။ အလုပ်ကိစ္စအတွက် Laptop ၀ယ်ဖို့စဥ်းစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ သုံးလို့ အဆင်ပြေမယ့် Laptop မျိုးဖြစ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ ဘာဝယ်ရမလဲဆိုတာ ရွေးရခက်နေရင်တော့ ဈေးနှုန်း “ (10) သိန်းအောက်” မှာရှိတဲ့ အကောင်းဆုံး လုပ်ငန်းသုံး Laptop (5) လုံး အကြောင်းကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး။
မျက်နှာပြင် 14-inch screen ရှိပြီး ထူးကဲတဲ့hardware တစ်ချို့နဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကြောင့် Business Laptop ကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ core i5, 8GB RAM အပြင် 512GB of SSD တို့ပါဝင်ပါတယ်။ တစ်ချိန်ထဲမှာ Program တော်တော်များများနဲ့ Chrome ထဲမှာ tabs တွေဒါဇင်လိုက် ဖွင့်ထားမယ်ဆိုရင်တောင် စက်လေးမသွားပါဘူး။ Intel UHD Graphics ကိုအသုံးပြုထားပြီး Game ဆော့တာ၊ 4K video တွေကို edit လုပ်တာတွေကိုအလွယ်တကူ လုပ်လို့ရပါတယ်။ Laptop ရဲ့ အလေးချိန်က 1.9kg ဖြစ်ပြီးအထူ 1.95-inch ပဲရှိလို့ သယ်ရတာပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိနေမှာပါ။ Battery အနေနဲ့ကလည်း ပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် တစ်နေကုန်ထိ အသုံးခံပါတယ်။
မျက်နှာပြင် ၁၂လက်မ display ပါပြီး ခေါက်ချိုးနိုင်တဲ့ kickstand ပါပါတယ်။ Laptop လိုရော tablet လိုပါ အသုံးပြုနိုင်မယ့် 2-in-1 device တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Microsoft Surface Pro7ရဲ့ design ရဲ့ထူးခြားချက်ကတော့ အားသွင်းဖို့နဲ့ တခြားအရံပစွည်းတွေတပ်ဖို့ USB –C port ထည့်ပေးထားတာပါ။ မြန်ဆန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အရောင်အသွေးစုံတဲ့ display၊ သုံးရတာအဆင် ပြေတဲ့ keyboard တွေ က Surface Pro 7ရဲ့ အဓိကအားသာချက် တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ Weight အနေနဲ့ 1.7 ပေါင်လောက်ပဲရှိပြီး ခေါက်ချိုးလို့လည်းရသေးတယ်ဆိုတော့ ကိုင်ရတာ အတော်လေးပေါ့ပါးမှာပါ။ 10th Gen – Intel Core i3, i5, i7 ထုတ်လုပ်ထားပြီး Ram 4GB, 8GB, 16GB ထိ ရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။
Ideapad 320 Laptop ဟာ Lenovo ရဲ့ IdeaPad series ထဲကတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ Intel core i5-10th Gen processor ကိုအသုံးပြုထားပြီး၊ 8GB RAM ပါတယ်ဆိုတော့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ app တွေ software တွေအကုန်လုံးအတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းတွေပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Body က ပါးပါးလေးနဲ့ weight ကလဲ5ပေါင်တောင်မကျော်ဘူးဆိုတော့ လက်ထဲမှာသယ်ရတာပေါ့ပါးပြီး အဆင်ပြေပါတယ်။ NVIDIA GEFORCE Graphics ဖြစ်ပြီးတော့ 15.6-Inch full HD Anti-Glare Display ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ Laptop ရဲ့ တည်ဆောက်မှုပုံစံ ကောင်းတာ၊ ကြာရှည်ခံနိုင်တာတွေကတော့ ဒီဈေးတန်း တခြား Laptop တော်တော်များများထက် သာတယ်လို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
4. Hp Pavilion 14-ce 3068
Intel Core i5-10th Gen Processor နဲ့ RAM 4GB DDR4 ကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းကို စိတ်ချရပါတယ်။ Internal Storage – 512 GB ပါဝင်တဲ့အတွက် data အသွင်းအထုတ် ပိုမိုမြန်ဆန်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ မျက်နှာပြင် 14″ screen နဲ့ Full HD အမျိုးအစားဖြစ်ပြီး Graphic ပိုင်းအတွက် NVIDIA Geforce MX130 2GB ကို တပ်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက် ရုပ်ထွက်ကြည်လင်ပြတ်သားပြီး video editing software တွေကို သက်တောင့်သက်သာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ အရည်အသွေးကောင်းမွန်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ရုံးသုံး Laptop ကောင်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီး ရွှေရောင်ဖျော့ဖျော့ဒီဇိုင်းနဲ့ လှပသပ်ရပ်စွာထုတ်လုပ်ထားလို့ မြင်လိုက်တာနဲ့ မျက်စိကျစေမှာပါ။
Google Chromebook တွေကပုံမှန် Laptop တွေအတိုင်း Stylish and powerful ဖြစ်ပါတယ်။ Pixelbook Go မှာ အရင် Pixelbook ရဲ့ premium features တော်တော်များများကို ယူပြီး ပိုကောင်းအောင်ပြောင်းလဲထားတာတွေ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အဓိကအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ “Hush” keyboard က typing ရိုက်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေး စိတ်ကျေနပ်မှု ပေးစေနိုင်သလို နောက်ထပ် အားသာချက်အနေနဲ့ Live Streaming လုပ်မယ်ဆိုရင်တောင် ( 15 ) နာရီနဲ့ (47) မိနစ်အထိ ခံတယ်ဆိုတော့ အကောင်းဆုံး Battery Life လို့တောင်ပြောလို့ရပါတယ်။ business trip တွေ သွားနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာ battery ကိုအားနာစရာမလိုပဲ သွားရင်းလာရင်းအလုပ်လုပ်လို့ကောင်းမယ့် laptop မျိုးပါ။
Find Best Valued Laptops with best ever deals at SUNNY eSTORE here.